keentay warqad looxa
Dukaan Hore Saxeex / Saxeex
khaanadda khafiifka ah saxeex khafiif ah / saxeex
Supermarket signboard / saxiix
Calaamadaha Tafaariiqda Makhaayadaha
Calaamadaha Tafaariiqda Farmashiyaha
Khaanadda khafiifka ah
Meelaha xayeysiiska ah ee xayeysiinta
Horumarinta sanduuqyada iftiinka xayeysiinta
Asalka sanaadiiqda iftiinka xayeysiinta waxaa dib loo raadsan karaa 1970s, horraantii Waqooyiga Ameerika, iyo goor dambe Yurub. Marka la barbardhigo Waqooyiga Ameerika iyo Yurub, warshadaha sanduuqa fudud ee Shiinaha ayaa xilli dambe bilaabay, welina waa warshad soo ifbaxaysa ...
Hordhaca himilooyinka horumarka mustaqbalka ee sanaadiiqda nalka loo yaqaan Acrylic Light
Sanduuqa nalka khariidaddu waa calaamadda iyo astaanta dukaanka, oo metelaysa muuqaalkeeda. Sidaa darteed, naqshadeynta ayaa iftiimin doonta faa'iidooyinka dukaanka laftiisa. Shaqada sanduuqa iftiinka hore waa xayeysiinta sanduuqa nalka, iyo sheeko-faneedka iyo sanduuqa nalka gaarka ah ayaa jecel ...
Isbedelka Horumarka ee Acrylic ee Warshadaha Xayeysiinta
Acrylic, oo badanaa loo yaqaan 'plexiglass', waa wax soo saar batrool. Waxyaabaha ceyriin ee ugu weyn waa walxaha MMA iyo magaca kiimikada waa methyl methacrylate. Meelaha ugu badan ee laga codsado waa: warshadaha wax soo saarka xayeysiinta, qurxinta qurxinta ...
Lambarka 223, Ilaalinta Tamarta iyo Ilaalinta Deegaanka Warshadaha, Huaizhou New Town, Jintang, Chengdu, Sichuan
7 maalmood usbuucii laga bilaabo 10:00 am ilaa 6:00 pm
Zhengcheng Starlight Energy-saving Technology Co., Ltd. waxaa ka go'an cilmi baarista iyo horumarinta iyo soo saarida sanaadiiqda iftiinka ee keydinta tamarta, oo si gaar ah loogu talagalay bakhaarrada raaxada, farmasiyada, dukaamada waaweyn, bangiyada, saldhigyada gaaska, maqaayadaha iyo dukaamada silsiladaha kale si loo soo saaro wax wanaagsan iyo tayo sare leh ...
Saxeex Farmashiyaha, Bannaanka Laydhka Bannaanka Saxeexa, Saxiixa Boodhka Nalalka Nalalka ah, Calaamadaha Xayeysiinta, Vacuum U samaynta Sanduuqa Nalalka Nalalka, Calaamadaha Iftiiminaya,